Iindaba -I-Elon Musk kaTesla iyathetha malunga noyilo olulodwa kunye nesicwangciso sokulungisa ukungqubana
U-Elon Musk kutshanje wabelane ngeenkcukacha zesicwangciso sokulungisa ukungqubana kukaTesla, kwaye inkampani yasungula isithuthi esenziwe nge-cast-piece. Ukuhlaziywa kunika uTesla ukuqonda ngeendlela ezivelayo zokulungiswa kwemoto kunye nokulungiswa, okuyinkalo yeshishini labenzi bemoto yombane, kwaye eli candelo linokubaluleka ngakumbi njengoko inkampani ikhula.
Ukuthathela ingqalelo ukuba izithuthi zikaTesla ziya kwenziwa kusetyenziswa ukuphoswa kwe-monolithic enkulu, amalungu oluntu lweemoto zombane ebebuza malunga nesicwangciso senkampani sokulungisa umonakalo obangelwe ziingozi ezinje ngeengozi ezincinci. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba imoto yombane inenani elincinci lokulahla okukhulu, kuya kuba ngumceli mngeni ukubuyisela iinxalenye zemoto.
Kule meko, uTesla ubonakala ngathi uphakamise isisombululo esinovelwano sokujongana nemiceli mngeni enokubangelwa kukuphosa umntu omnye. NgokukaMusk, iziporo zokulwa nokungqubana kwezithuthi ezinje ngeModeli Y eyenziwe eJamani zinokuthi nje “zinqunyulwe endaweni yazo kufakwe ezinye iibholiti zokulungisa ukungqubana.”
Ukujonga ukuba ukulungiswa kukaTesla namhlanje sele kulucelomngeni kwaye kuyabiza, kuya kuba ngumdla ukubona ukuba ukusetyenziswa kweenkampani ngamalungu okutshixa kuya kwenza ulungiso lubize okanye lubize kakhulu.
Ukongeza ekuhlaziyeni iqhinga lokulungisa ukungqubana kukaTesla, i-CEO yeTesla ikwabonelela ngolwazi oluneenkcukacha malunga neepakethe zebhetri zabavelisi bezithuthi zombane, ekulindeleke ukuba zisetyenziswe kwizithuthi ezinjengee-S-grids, uCybertruck Imoto entsha eyenziwe eJamani. Uhlobo lwe-Y. UMusk uthe iipakethi zebhetri ezakhiweyo zinokubonelela ngokuqina okungcono kwetorsional kunye nokuphuculwa komzuzu ogqithileyo we-inertia, ngokwenze ukuba izithuthi zikaTesla zikhuseleke.
Ipakethi yebhetri iya kuba sisakhiwo esincamathelayo kunye neebhetri ezinokuhambisa amandla okucheba phakathi kweepaneli zentsimbi eziphezulu nezisezantsi, ngaloo ndlela kususwe uninzi lwamalungu omzimba aphakathi, ngelixa zibonelela ngokuqina okungcono kwethorsional kunye nokuphuculwa kwamathuba epali okanye i-inertia. Olu luphumeleleyo olukhulu.
“Ipakethi yebhetri iya kuba sisakhiwo esincamathelayo esineebhetri ezinokudlulisa amandla okucheba phakathi kweepaneli zentsimbi eziphezulu nezisezantsi, ngaloo ndlela kushenxiswa uninzi lwamalungu ombindi, ngelixa kubonelela ukuqina okungcono kwethoni kunye nokuphuculwa komzuzu we-Inertia. Olu luphumeleleyo olukhulu, utshilo uMusk.
Into enomdla kukuba, le nkcukacha ichaziwe ngaphambili yingcali yolondolozo lweemoto uSandy Munro, owachaza ukuba iibhetri ezilungelelanisiweyo zinokwenza iTesla ikhuseleke kwaye ingathambeki kakhulu kwiingozi ezinjengemililo. Ngokwazi kukaMusk, kutshanje ubonakele eqinisekisa ukuqonda kukaMunro kwaye wabonisa kuTwitter ukuba eli gqala "liyabazi ubunjineli."
U-CEO u-Elon Musk uthe i-SpaceX izakusasaza ukuqalisa kunye nokufika kwe-starship okulusizi…
Umphathi we-Tesla u-Elon Musk usandula ukukhankanya ukuba uCybertruck uza kufumana "uphuculo oluncinci."